Ezonyango - iPandawill Technology Co, Ltd
Akukho candelo loshishino apho ukusebenza kwebhodi yesekethe kunye nomgangatho kubaluleke kakhulu.
Imijikelezo yePandawill kunye namaqabane ethu okuvelisa banokuqonda okusisiseko kwemigangatho kunye nokulindelwa komgangatho ofunekayo kwicandelo lezonyango kwaye siqinisekisa ukusebenza kunye nokuthembeka kweebhodi esizenzayo nesizibonelelayo.
Imijikelezo yePandawill inikezela uluhlu olupheleleyo lokugqitywa kokuthengiswa (kubandakanya indibano esekwe kwi-HASL eyamkelekileyo ngezicelo zonyango kunye nobomi) kunye nazo zonke izinto ezenziwe ngombala (kubandakanya abavelisi abonyuliweyo ukuba kuyafuneka).
Ukubaluleka kokulandeleka kwiibhodi zesekethe yezonyango kubaluleke kakhulu kwaye siyakwazi ukunika umgangatho opheleleyo kunye nomkhondo wophicotho-zincwadi kuwo onke amabhodi anikezelweyo, kubandakanya amacandelo eminqamlezo, iisampulu zokuthengisa kunye namacandelo ovavanyo abonisa ukumelana ne-delamination ngexesha lenkqubo.
Iibhodi zethu zesekethe zisetyenziswa ngokubanzi kwihlabathi liphela kwizicelo zonyango kwaye iPandawill iya kuqinisekisa ukuba ibhodi nganye ebonelelweyo yeyona mgangatho ubalaseleyo kwaye yenzelwe / yenziwa ngenjongo yokubonelela ngemigangatho ephezulu yokusebenza kunye nokuthembeka.